Malagasy ve ianao? | GAZETY_ADALADALA
Filed under: anao ny fitenenana, politika, tantaram-pirenena, tapatapany |
« Grippe A: Raha misy voa ny iray amin’ny mpivady, dia ahoana? K’izaho ve? »
Gasi, on 01/10/2009 at 4:32 said:
Tena Malagasy tokoa aho ary hireharehako izany.
Misaotra amin’ny lahatsoratra. Tsy asiana resaka lava intsony ny zavatra niseho fa na inona na inona fironana politika ananana dia tsy azo ekena mihitsy ny fanitsakitsahana ny maha antsika Malagasy. Izay faly tamin’ireny dia mety tsara aminy ny mitady zom-pirenana hafa toy ny mifindra any Congo ohatra. Vonona handray azy tsara ny any.
Tsy manome tsiny be fahatany akory fa toa nahagaga ihany fa ohatry ny nanaiky resy ilay delegasiona Malagasy. Tsy masoivohon’ny Madagasikara na piraminisitra lefitra ny tenanay, fa raha ny fahafantaranay ny « procedure » amin’ny fivorian’ny ONU dia azo natao tsara ny namaly iny antsojay iny amin’ny alalan’ny fampiasana ny procedure-ny ONU ihany. Amin’ny fivoriana toy izao, indrindra fa amin’ny sehatra avo izay natao handala ny demokrasia, dia tsy misy ny fanampenam-bava, fa mivoaka izay tsy mahatanty na tsy mankasitraka. Izay no fomba demokratika fa tsy fanampenam-bava. Mahalasa eritreritra ihany ny fihetsika nasehon’ny teknisiana Malagasy tany an-toerana. Tsy fanomezan-tsiny hoy aho fa mahagaga ihany ilay izy.
Inona ary no tokony hatao: miantso ny Malagasy rehetra izahay mba hamoaka ny sainam-pirenena Malagasy– hanofahofa, hanangana, hitondra an’izany amin’ny 06 Oktobra raha toa ka sahy hipoitra ihany ry zareo SADC. Tsy mampaninona izay tohananao na i Andry na Ra8, fa andao aseho fa Malagasy isika ary reharehantsika izany. Miangavy ihany koa izahay ho an’ny mpanao fandaharana amin’ny radio rehetra mba handefa hira izay maneho sy mamoha ny fitiavan-tanindrazana mandritra io tontolo andro io, eny fa na dia ny andro mialoha an’io aza. Miangavy indrindra an’ny Gazety Adaladala mba hanaparitaka ity hevitra ity. Aelezo amin’ny sehatra rehetra mba ho re-tany sy ren-danitra. Hatsangana ny saina Malagasy na amin’ny toerana aiza na amin’ny toerana aiza mba ho hitan’ireo izay vahiny ho avy eo ny atao hoe hambom-po Malagasy. Aleo koa ho hitan’ny havany eo izay maniry hifindra any Congo.
Gasy aho ary reharehako izany. Mitsangana aho miaro ny voninahitra sy ny hasin’ny tanindrazako. Tsy ekena mihitsy ny fanitsakitsahana ny maha Malagasy ahy. Raiso ny andraikitrao ry Malagasy.
JimmyBean, on 01/10/2009 at 3:41 said: